၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရဟန်းသိက္ခာခံယူကြသော ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများ Ongoing Formation သင်တန်းပြုလုပ်
၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူသော ကက်သလစ် ဘုန်းတော်ကြီးများ Ongoing Formation Program ကို အောက်တိုဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၇) နေ့ထိ ပုသိမ်၊ မရမ်းချောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။
ဤအစီအစဉ် သင်တန်းသည် မြန် မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ရဟန်း သိက္ခာခံယူသော ကက်သလစ်ဘုန်းတော် ကြီးများစုစုပေါင်း (၁၈)ပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။ Ecclesiastical Commission for Clergy, ECC, Chairman Bishop Stephen (Bishop of Loikaw), Bishop John နှင့် ECC members ဖြစ်ကြသော Fr. Henry Ei Klay, Fr. Cyprian Aung Win (Rector of Major Seminary, Yangon), Fr. HagyinusMyintSoe, Fr. Simon Tin Maung, Fr. Vinny (SJ), နှင့် Sr. Ada (SFX) တို့လာရောက်သင်ကြားပို့ချပေးကြသည်။
သင်ကြားပို့ချခြင်းများတွင် အဓိက ဘာသာရပ်များသည် Psycho Spirituality, ဆုတောင်းခြင်း အသက်တာ၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Spiritual Concealing များပါဝင်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် လေးငါးနှစ်အတွင်း ဝေးကွာခဲ့သော အတန်း ဖေါ် ရဟန်းသူငယ်ချင်းများနှင့် ပြန်လည် တွေ့ဆုံကာ မိမိတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေ သော သာသနာအမှု လယ်ကွင်းတွင်တွေ့ ကြုံခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံများ အချင်းချင်း ပြန်လည်ဝေမျှခြင်းနှင့်အတူ ယခုမိမိ၏ရ ဟန်းအသက်တာပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးလာမည့်အနာဂတ်ကိုခွန်အားယူခရီးဆက်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။
Mawlamyine – OSC.
By Cardinal Charles Maung Bo., SDB
ေမလ၊ ၁၀ရက္၊ ၂၀၂၀ခုႏွစ္
In time of Crisis living with hope
CBCM donating to Ministry of Health, Yangon
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး
လုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် မှ လှူဒါန်း
Live stream Mass By Cardinal Charles Maung Bo., SDB, Archbishop Yangon
We haveaGood Shepherd who is inclusive. A good shepherd who is willing to die for us – “I lay down my life for my sheep.” Jesus said. How we watched with tear in eyes so many doctors and nurses all over the world, were willing to die forastranger knowing fully well this menace of COVID isarisk. They are the good Shepherds.
'' ဂျွန်ပေါလ်ဆန်လှူအသင်း " ထူထောင်ခြင်း
DIVINE MERCY SUNDAY MESSAGE : LIVESTREAM MASS MESSAGE
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID 19) ကူးစက်ရောဂါပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍
ကာဒီနယ် ချားလ်စ်မောင်ဘို၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
လားရှိုး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းအုပ် သာသနာအတွက် ဆရာတော်အသစ်အား သိက္ခာတင်ပေးခြင်း
Statement by Cardinal Charles Maung Bo, on the forthcoming Elections
The Right to vote for me and The Sacred Pilgrimage of Election
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီးများ အဖွဲ့ချုပ်၏
၂၀၂၀ - ပြည့်နှစ် ၊ ပထမ(၆)လပတ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ပေးသော ခရစ္စမတ်နေ့ သတင်းစကား
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီများ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ
ဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီး ဖဲလစ် လျန်းခင်းထန် ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ခရစ္စမတ် သတင်းစကား
ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို၏ ၂၀၁၉ - ခရစ္စမတ်သတင်းစကား
ထုတ်ပြန်ချက် (တွေ့ရှိချက်များ ၃)
ထုတ်ပြန်ချက် (တွေ့ရှိချက်များ ၂)
ထုတ်ပြန်ချက် (တွေ့ရှိချက်များ ၁)
Christus Vivit စာချွန်တော်ကို အခြေပြုသော ဆလေးရှင်းလူငယ်များ တွေ့ဆုံမွမ်းမံသင်တန်း
ဖါသာရ် လုကာ့စ် ဒေါင်ဇယ် (SDB) အား လားရှိုးဂိုဏ်းအုပ် သာသနာ၏ အရိုက်အရာ ဆက်ခံခွင့်ရှိသော ဆရာတော်အဖြစ် ခန့်အပ်
တောင်ကြီးစိန်မိုင်ကယ်ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်